Uncategorized – Yess Khabar
२ फाल्गुन २०७५, बिहीबार ०२:५४२ फाल्गुन २०७५, बिहीबार ०२:५४२ फाल्गुन २०७५, बिहीबार ०२:५४ by Yess KhabarNo Comments
इलाममा एक जना व्यक्ति अवैध सामान सहित पक्राउ
इलाम भन्सार छली भारतबाट नेपाल ल्याउँदै गरेको समान सहित एक जना इलामको पशुपतीनगरबाट पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा भारतको दार्जिलिङ ओकाइटी स्कूलडाँडा १ का ३१ वर्षीय अजित राई रहा छन् । उनलाइ बुधबार साँझ ७ बजे इलामको सुर्योदय नगरपालिका वडा २ स्थित चार माइलबाट पशुपतिनगर बजार आउने बाटोबाट भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीसहित प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले डब्लुदी ७८(२६८६ नम्बरको भारतीय गाडीमा भारतबाट नेपालतर्फ लोड गरी ल्याउँदै गरेको ३ सय २० तथा ब्लाङ्केट बरामद गरेको छ । पक्राउ परेका मानिस र सामान आवश्यक कारबाहीको लागि बुधबार नै पशुपतिनगर भन्सार कार्यालयमा दाखिला गरीएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामले जनाएको छ ।
२० माघ २०७५, आईतवार १३:५०२० माघ २०७५, आईतवार १३:५०२० माघ २०७५, आईतवार १३:५० by Yess KhabarNo Comments
आफ्नो मृत्यु पछि पत्नीलाई एक्लोपन नहोस भन्दै पतिले गरे यस्तो ! पत्नीले पाइन् कहिल्यै नसकिने जिवन्त माया !
आफ्नो मृत्यु हुने पक्का भएपछि अमेरिकाको क्याम्पका एक मानिसले आफ्नो श्रीमतीलाई आफ्नो अभाव नहोस् एक्लोपनले नसताओस भन्दै अचम्मको गिफ्ट दिएका छन् । एक वर्ष अगाडी नै मृत्यु भएका पतीले पठाएको गीफ्ट पाएकी महिलालाई अघिल्लो वर्षको भ्यालेन्टाइनमा श्रीममानले पठाएको गिफ्ट पछिल्लोे वर्षको भ्यालेन्टाइन डेको दिन प्राप्त गरेकी छन् । उनी आफ्नो श्रीमानले पठाएको गीफ्टमा लेखेका केही कुराले उनलाई भावुक बनायो । केही छिन उनीलाई विश्वास नै लागेन तर उनले लेखेको कुरा र उनको सेभ फोन नम्बर पाएपछि मात्र ती महिलाले विश्वास गरिन् । उनीहरु ब्योमिङ राज्यको क्यासपरकी शैली गोले र उनका पतिको नाम जिम गोले हो । उनीहरुको दुई सन्तान पनि रहेका छन् । क्यान्सरबाट ग्रस्त जिमको ४ वर्ष पहिले नै मृत्यु भएको थियो । सन् १९८४ मा भेट भएका जिम र शैलीले २०१२ मा नै विवाह गरेका थिए । विवाह गरेको केही समय नबित्दै शैलीले जीमलाई क्यान्स
२० माघ २०७५, आईतवार ०३:३३२० माघ २०७५, आईतवार ०३:३३२० माघ २०७५, आईतवार ०३:३३ by Yess KhabarNo Comments
वृद्धवृद्धालाई खुसीको खबरः ओली सरकारले बढाउँदैछ वृद्धभत्ता
काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आगामी आर्थिक वर्षमा वृद्धभत्ता बढ्ने बताएका छन् । सहिद हेमनारायण यादवको १५औँ स्मृतिसभालाई शनिबार सिरहामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वृद्धवृद्धाको हितका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताए । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले देशको ढुकुटी रित्तो पारेकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा वृद्धभत्ता बढाउन नसकेको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । ‘वृद्धभत्ता बढेन भनेर निराश हुनुपर्ने अब धेरै दिन छैनन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘आउने आर्थिक वर्षमा सरकारले अवश्य बढाउनेछ ।’
९ माघ २०७५, बुधबार १३:०९९ माघ २०७५, बुधबार १३:०९९ माघ २०७५, बुधबार १३:०९ by Yess KhabarNo Comments
सबैभन्दा सुन्दर एयरहोस्टेस ‘मेबेल गुओ’का तस्वीर भाइरल
काठमाडौं। सामाजिक संजालमा २४ वर्षकी एयरहोस्टेस मेबेल गुओका तस्वीर निकै भाइरल भइरहेका छन् । यी सुन्दर एयरहोस्टेसको फोटो उनले काम गर्ने विमानमा चढेका एक यात्रीले फेसबुकमा शेयर गरेपछि भाइरल भएको हो । उनका फोटोको विषयमा युजरहरुले विभिन्न किसिमका प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । भाइरल भएका तस्वीर गएको अक्टोबर १२ मा खिचिएको बताइएको छ । एयर एशियामा काम गर्ने यी एयरहोस्टेसको फोटो त्यही विमानमा यात्रा गरिरहेका जर्ज वोंगले शेयर गरेका हुन् । मेबेल गुओ चीनकी हुन् । उनी मलेसियामा कार्यरत छिन् । मेबेलले विमानमा स्न्याक्स सर्भ गर्न लागेका बेला जर्जले फोटो खिचेका थिए । मेबेल सामाजिक संजालमा निकै सक्रिय छिन् । इन्स्टाग्राममा उनका १ लाख ६५ हजार भन्दा धेरै फलोअर छन् । फोटो भाइरल हुनुभन्दा पहिले इन्स्टाग्राममा उनका ३० हजार मात्र फलोअर भएको र फोटो भाइरल भएपछि एक्कासी फलोअर बढेको बताइन्छ । हेर्नुहोस् सुन्द
२९ पुष २०७५, आईतवार १२:०३२९ पुष २०७५, आईतवार १२:०३२९ पुष २०७५, आईतवार १२:०३ by Yess KhabarNo Comments
बरु मर्न तयार छु तर कृष्णको साथ छोड्दीन भन्दै भावुक बनिन् रुपा
काठमाडौं । सानैमा जीम्मेवारीको भारी बोकेका कृष्ण ओलीका सपना धेरै थिए । इलेक्ट्रिक सब इन्जिनियर पढेका रुकुम सिम्लिका कृष्ण ओली ठुलो सपना थियो आफ्नी जीवनसंगिनीलाई स्टाफ नर्स पढाउने । कसलाई थाहा हुन्छ र भोलि ? त्यस्तै बज्रपात बनेर आयो जेठ २५ कृष्ण र रुपाको जीवनमा । अघिल्लो दिन अर्थात २४ जेठमा म्यारिज एनिभर्सरी मनाएका यी दम्पतिलाई अर्कोदिन निकै दुखद बनेर आयो । उनि दाङको तुल्सिपुरमा विद्युत अफिसमा साईट सुपरभाईजरको रुपमा काम गर्थे । घटनाको दिन आफ्ना अन्य सहयोगीको साथ कस्टमरहरुलाई बिद्युत प्रवाह गर्न पोलमा चढेका एक्कासी भुईमा खसे । ११ हजार भोल्टेजको करेन्टको झट्काले कृष्णको सपना मात्र पच्छारेन जीवन नै मृत्युको मुखमा लगेर छोड्यो । अर्कैको गल्तिको शिकार भए उनि । साँझपख बिद्युतको लाइन बन्द गरेर पोलमा चढेका बेला नजिकैका मिलवाले साहुले लाईन अन गर्दिएपछि उनलाई करेन्ट लाग्यो । लाग्ने बित्तिकै भुईमा झ
२६ पुष २०७५, बिहीबार १४:३८२६ पुष २०७५, बिहीबार १४:३८२६ पुष २०७५, बिहीबार १४:३८ by Yess KhabarNo Comments
काठमाडौँ : देशका विभिन्न जिल्लालाई जोड्ने काठमाडौंको गोंगबु बसपार्क । राजनीति जस्तै अस्तव्यस्त र फोहोर । वरिपरि दिनभरि धूलो उडिरहन्छ । मान्छेको आबादी बढेसँगै त्यहाँको अव्यवस्थित जिन्दगीले बाटो धूलाम्मे भइरहन्छ यही अस्तव्यस्ततामा आफ्नो र सन्तानको भविष्य खोज्न दोलखाकी करुणा भण्डारी धूलोको पर्वाह नगरी सडकपेटीमा सानो व्यापार व्यवसाय गरिरहेकी छन् । ‘त्यति धूलो पनि छैन, त्यति व्यापार पनि छैन,’ उनको सहज उत्तर थियो ।दोलखादेखि काठमाडौंसम्मको यात्रा भने करुणाले त्यसै गरेकी होइनन् । उनी काठमाडौं आउनुको पनि लामै कहानी छ । बेलाबेलामा टाउको दुखिरहने रोगले ग्रसित भएपछि करुणा काठमाडौं आएकी थिइन् । महिनैपिच्छे दोलखाबाट काठमाडौं आउनुपर्ने भएपछि उनी यतै बस्ने निर्णय गर्दै थिइन् । उता आफ्ना स–साना नानीहरूलाई हुर्काउने जिम्मा पनि उनको काँधमा थियो । ‘आफूले त नपढेर दुःख पाइयो, भोलि छोरीहरूले जिन्
२६ पुष २०७५, बिहीबार ०९:३२२६ पुष २०७५, बिहीबार ०९:३२२६ पुष २०७५, बिहीबार ०९:३२ by Yess KhabarNo Comments
मृत्युलाई जितेर बच्न भएका सफल कृष्ण ओली भन्छन्, ‘उनी नभएको भए शायद…’,रुपाका रसाए आँखा
रुकुमको सानीभेरी गाउँपालिका-९ मा जन्मिएका कृष्ण ओली एक विद्युत प्राविधिक हुन्। आफुले काम गरेर पैसा कमाई श्रीमतीलाई स्टाफ नर्स बनाउछु भनेर बिजुलीको काम गर्दै आएका कृष्ण ओलीको अहिले दुवै हात र बायाँ खुट्टा छैन्।२१ वर्षीय कृष्णको अनुहारमा झट्ट हेर्दा निकै स्वस्थ्य देखिन्छन्। तर उनीमाथि ठुलो बज्रपात आईलागेको छ। विद्युत प्राविधिक पढेका उनी दाङ्को तुल्सीपुरमा विद्युत विस्तारको काम गर्दै आएका थिए। गत जेठ २५ गते विद्युत लाइने विस्तार गर्ने क्रममा उनलाई ११ हजार भोल्टेज क्षमताको करेन्ट लागेर कृष्णले सधैका लागि दुवै हात र एउटा खुट्टा गुमाउनु पर्याे। दाङ्को तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१४ बखरिया भन्ने ठाउँमा ग्राहकलाई विद्युतको लाइन प्रवाह गर्न पोलमा चढेको बेला करेन्ट लागेको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन, ‘एउटा पोलमा लाईन काटेर म लाइन विस्तार गर्नको लागि अर्काे पोलमा चढेर करिब–करिब तार जोड्ने काम सकिएको थ
२६ पुष २०७५, बिहीबार ०३:०४२६ पुष २०७५, बिहीबार ०३:०४२६ पुष २०७५, बिहीबार ०३:०४ by Yess KhabarNo Comments
भारतीय क्रिकेटर हार्दिकले कति युवतीसँग रात बिताए?, जवाफ दिएर फसे
एजेन्सी । भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पँड्या एक विवादस्पद भनाइका कारण संकटमा फसेका छन् । करण जौहरको च्याट शो कफि वीद करणमा सहभागी भएकाले उनले महिलामाथि प्रहार हुने गरि अभिव्यक्ति दिएपछि भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्डले उनीसँग स्पष्टीकरण मागरेको छ । कार्यक्रममा एक प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले धेरै युवतीसँग रात बिताएको खुलासा गरेका थिए । भने भर्जीनिटी गुमाएको विषयमा पनि आमाबाबुसँग कुरा हुने गरेको र भर्जीनिटी गुमाएपछि घरमा भनेको उनले बताएका थिए । साथै उनले कुनै युवतीलाई हेर्न आफुलाई निकै मन पर्ने बताएका थिए । अर्का क्रिकेटर लोकश राहुलसँगै सो कार्यक्रममा सहभागी भएकाले उनले महिलाको भावनामाथि ठेस पुग्ने गरि अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सवत्र विरोध भएको छ । आलोचना बढेपछि उनले ट्वीटरमार्फत माफी पनि मागेका छन् । उनले शो को नेचरअुसार आफु त्यसमा हराएकोले त्यस्तो कुरा गरेको बताएका छन् । साथै आफ्नो भनाइल
२५ पुष २०७५, बुधबार ०९:२९२५ पुष २०७५, बुधबार ०९:२९२५ पुष २०७५, बुधबार ०९:२९ by Yess KhabarNo Comments
जन्मदै हात खुट्टा नचल्ने दर्शन प्रमोद खरेलका ठूला फ्यान रहेछन् , प्रमोदले दर्शनको घर मै गएर १० हजारको सहयोग गरे
काठमाडौं । काठमाडौं बानेश्वरको एउटा बन्द कोठाबाट संसार चिहाइरहेका दर्शन केसी जन्मजात नै अपागं भएको उनको परिवारलाई एक वर्षपछि बल्ल थाहा भयो । जन्मजात अपाङ्ग दर्शन बोल्न सक्दैनन् । साथै हिड्न पनि सक्दैनन । प्रविधिमा राम्रो दख्खल भएका दर्शन फेसबुक मार्फत आफ्ना बेदना पोख्न मात्र सक्ने उनी चर्चित गायक प्रमोद खरेलका ठूला फ्यान रहेछन् । उनको बुबाको मोवाइल, आफ्नो आइप्याड र ल्यापटप कम्प्युटर सबैमा प्रमोदका कैयौँ गीतहरु दर्शनले राखेका छन् । अरु त अरु आफ्नो मोवाइल र आइप्याड, ल्यापटपमा समेत प्रमोदकै तस्विरलाई सजाएका दर्शनलाई भेट्न मंगलबार प्रमोद उनकै डेरामा पुगे । प्रमोद उनको डेरामा पुग्दा जन्मदै हात खुट्टा नचल्ने दर्शन ह्विलचियरमा बसिरहेका थिए । आफुले भगवान मानेको गायक खरेललाई आफ्नै कोठामा भेट्न पाउँदा दर्शन भक्कानिए भने प्रमोद पनि निकै भावुक भए । त्यतिबेलाको माहोल निकै सम्बेदनशिल बनेको थियो । खरे
२५ पुष २०७५, बुधबार ०४:०१२५ पुष २०७५, बुधबार ०४:०१२५ पुष २०७५, बुधबार ०४:०१ by Yess KhabarNo Comments
श्रृंखला खतिवडा भन्छिन् -‘मोडल नभन्नु, फिल्म खेल्दिन’ (भिडियो)
काठमाडौँ – नेपाली इतिहासकै सर्वाधिक लोकप्रिय मिस नेपाल श्रृंखला खतिवडाको वाहवाही अझै सकिएको छैन । मिस नेपालको ताज पहिरिएसँगै चर्चामा आएकी श्रृंखलाले मिस वर्ल्ड प्रतिस्पर्धामा एकपछि अर्काे अवार्ड जित हात पार्दै चर्चाको शिखर चढिन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने ‘ब्युटी विथ पर्पज’ र ‘मल्टिमिडिया अवार्ड’ हात पार्दै अघि बढेसँगै उनको नाम अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुमा समेत छायो । मिस वर्ल्डको प्रतिस्पर्धा गर्न जाने हरेकले एउटा प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । चाहे त्यो ठूलो होस् वा सानो । दिर्घकालिन सोच राख्ने श्रृंखलाले भने आआफ्नो प्रोजेक्टका लागि मकवानपुरको चेपाङवस्ती रोजिन् । यो निकै विकट वस्ती हो जहाँ न्यूनतम पूर्वाधारको समेत अभाव छ । यो वस्तीमा करिव तीन हजार ५ सय जना बसोवास गर्छन् । हेर्नुहोस् श्रृंखला खतिवडा संगको (भिडियो) अन्तरबार्ता (भिडियो) https://youtu.be/lvAPwVwVaEs